Fahasalamana : saro-pady ny fandidiana ny rantsam-batana - Informations et Actualités sur Madagascar
Santé Fahasalamana : saro-pady ny fandidiana ny rantsam-batana
Fahasalamana : saro-pady ny fandidiana ny rantsam-batana
by Alpha world on 09 h 42 in Santé
Manatanteraka zaikabe andiany faha enina, etsy Antaninarenina hatry ny omaly ireo manampahaizana manokana momba ny fandidiana ny rantsam-batana sy ny aretina vokatry ny dona. Miompana manokana momba ny aretin’ny kiho sy ny lohalika ny lohahevitra dinihina mandritra izany.
Tanjona ny fanentanana ny olona tratran’ny dona hanatona ireo mpitsabo tsara hofana mba tsy hampiitatra ny aretina.
Nilaza ny dokotera Rabenintany Lalarisedy fa « matetika manatona mpanotra na mitsabo tena ny olona rehefa folaka na tapaka noho ny tahotra na ahiahy ny amin’ny halafon’ny fitsaboana any amin’ireo manampahaizana manokana ».
Saro-pady sady lafo ny fandidiana ny kiho sy ny lohalika eto amintsika. Mitentina hatrany amin’ny 20.000 dolara izay arakaraky ny hasarotan’ny fahavoazana. Manodidina ny 600.000 Ar ka hatramin’ny 800.000 Ar kosa, ny saran’ny fandidiana tsotra indrindra. Azo sorohina anefa ny fandidiana raha voavonjin’ny dokotera manam-pahaizana ara-potoana ilay olona tratran’ny dona.
Amin’ny ankapobeny, maimaimpoana ny saran’ny fandidiana fa ny vidim-panafody sy ny hofan’ny fitaovana hanatanterahana ny fandidiana no tena midangana. Maniry ny hanesorana ny haban-tseranana amin’ny kojakojam-pandidiana ireo mpitsabo manam-pahaizana manokana momba ny dona sy ny fandidiana ny rantsam-batana.
By Alpha world at 09 h 42